I-China Cordless Impact Wrench Wrench Ukukhiqiza nefektri | Feihu
I-Feihu cordless impact wrench iyithuluzi lamandla elisetshenziselwa ukukhulula noma ukuqinisa amantongomane e-lug, amabhawodi amakhulu, kanye neziqobosho ezibandayo noma ezigqwalile. Inikeza i-torque ephezulu kakhulu yokujikeleza engenakunikezwa umshayeli wamandla ojwayelekile. Ingasetshenziswa kabanzi ezimbonini eziningi, njengokulungiswa kwezimoto, ukugcinwa kwemishini esindayo, ukuhlangana komkhiqizo, amaphrojekthi amakhulu wokwakha, kanye nanoma yisiphi esinye isimo lapho kudingeka khona ukukhishwa kwe-torque ephezulu.
I-Feihu intambo engenantambo engenazintambo isebenza ngomshini wangaphakathi wokugwedla odlulisela amandla e-kinetic kushaft yokukhipha. Okulandelayo imininingwane yako:
Umthombo Wamandla: ibhethri le-lithium
Amandla webhethri: 2000mAh
Isikhathi sokushaja: 2 amahora
Isivinini: 0-2000 RPM
IMax Torque: 320 Nm / 2830 in-lbs
Usayizi we-Chuck: 14-28 mm
Ukupakisha: Ibhokisi lepulasitiki
I-1.Compact futhi Inamandla: Ifakwe imoto enamandla amakhulu, lesi sikrufu somthelela se-21V sihambisa i-torque enkulu ye-320 Nm kanye nejubane elikhulu le-2000 RPM, ikuvumela ukuthi uqinise noma ukhulule amantongomane ahlukahlukene namabhawodi kalula.
Ijubane eliguquguqukayo elingu-2: Nge-trigger eguquguqukayo eguquguqukayo, ungakwazi ukulawula kalula ijubane lesikrufu sakho. Uma uqhubeka ucindezela i-trigger, iyanda ijubane lesikrufu somthelela. Uma usukhiphe inhlamvu, ithuluzi lizoyeka ngokushesha, likwenze kuphephe kakhudlwana ngesikhathi sokusetshenziswa.
Isikhombi se-3.Power kanye nokukhanya kwe-LED: Ibhethri elishajekayo le-21V 2000mAh Li-ion livumela ithuluzi ukuthi lisebenze isikhathi eside. Inkomba yamandla ikhombisa ukuthi ingakanani amandla asetshenziswayo futhi ikukhumbuza ukuthi ukhokhise ngesikhathi. Ngokukhanya kwe-LED, ungakwazi nokusebenza ebumnyameni futhi ubone indawo yokusebenza ngokucacile.
I-4.Heavy Duty ne-Ergonomic Design: Ngezinto ezisezingeni eliphakeme zekhanda lensimbi le-alloy, zithuthukisa kakhulu impilo yokusebenza kwaleli thuluzi. Isibambo esingaphezulu kwesikhunta nge-ergonomic design sinikeza induduzo enkulu nokudlidliza okuncane.
I-Feihu intambo engenantambo engenantambo, ukukhetha okuhle kuwe, yenza umsebenzi wakho ube lula futhi ube lula.
Langaphambilini ILithium Water Gun
Olandelayo: Isikere esingenantambo
Ukudonsa Okungenantambo Okungenantambo
Intambo Yentambo Kagesi Engenantambo
Ukudonswa Kwentambo Okungenantambo Okungenantambo
Ama-wrenches angenantambo Impact High
Impact Ukudonsa Okungenantambo
I-Industrial Cordless Impact Wrench